2 Samoela 15 - Ny Baiboly
2 Samoela toko 15
Ny sain-dratsin'i Absaloma - Ny fikomiany - Ny nandosiran'i Davida.
1Taty aorian'izany nanomana kalesy iray sy soavaly ary olona dimampolo lahy izay nihazakazaka teo alohany Absaloma. 2Nifoha maraina koa Absaloma dia nitoetra teo akaikin'ny làlana mankao am-bavahady, ka isaky ny nisy olona manana ady, nankao amin'ny mpanjaka hangataka fitsarana, dia nantsoin'i Absaloma izy nataony hoe: An'inona no tanàna ihavianareo? ka nony namaly hoe: Avy any an'Ananona amin'ny fokon'Israely ny mpanomponao, 3dia hoy Absaloma taminy: Etsy ange! tsara sy marina ny raharahanao, fa ny olona hihaino anao avy amin'ny mpanjaka no tsy misy. 4Ary nanampy indray Absaloma nanao hoe: Iza re no hanangana ahy ho mpitsara amin'ny tany? Fa na iza na iza manana ady aman-draharaha dia ho tonga aty amiko ka homeko ny rariny avokoa. 5Ary isaky ny misy olona manatona hiankohoka eo anoloany, dia tolorany tànana, ary noraisiny sy norohany. 6Izany no nataon'i Absaloma tamin'ny olona rehetra amin'Israely izay nankao amin'ny mpanjaka nangataka fitsarana, ka nangoleny ny fon'ny olona amin'Israely.
7Nony afaka efa-taona dia hoy Absaloma tamin'ny mpanjaka: Raha sitrakao, avelao kely aho ho any Hebrona, hanefa ny voady nataoko tamin'ny Tompo. 8Fa fony nitoetra tany Gesora any Arama dia nanao voady ny mpanomponao ka nanao hoe: Raha averin'ny Tompo any Jerosalema indray aho, dia hanompo an'ny Tompo aho. 9Ka hoy ny mpanjaka taminy: Mandehana amim-piadanana! Dia niainga izy nankany Hebrona.
10Nandefa iraka mangingina hitety ny fokon'Israely rehetra Absaloma nanao hoe: Raha vao mandre ny feon'ny anjomara hianareo, dia lazao hoe: Manjaka ao Hebrona Absaloma! 11Ary nisy olona roan-jato lahy avy any Jerosalema niaraka tamin'i Absaloma, dia olona nasaina izy ireo ka nandeha tamim-pahatsoram-po, fa tsy nahalala na inona na inona. 12Mbola eo am-panaterana ny sorona Absaloma, dia naniraka haka an'i Akitofela, Gilaonita, mpanolo-tsaina an'i Davida tany Gilao tanànany. Nihamasaka fatratra ny firaisan-tetika hikomy, fa nitombo teo ihany ny vahoaka nomba an'i Absaloma.
13Dia nisy olona tonga nilaza tamin'i Davida, nanao hoe: Tafaraikitra amin'ny fanarahana an'i Absaloma ny fon'ny lehilahy amin'Israely. 14Ka hoy Davida tamin'ny mpanompony rehetra tao aminy tany Jerosalema: Mitsangàna, andeha isika handositra, fa tsy misy hahafahantsika amin'i Absaloma. Andao faingana fandrao dia tampohiny isika, ka ataony idiran-doza eto, sady hasiany amin'ny lelan-tsabatra ny tanàna. 15Ary hoy ny mpanompon'ny mpanjaka taminy: Na inona na inona no hevitra hotapahin'ny mpanjaka tompoko, dia indreto ny mpanomponao. 16Dia niainga ny mpanjaka, narahin'ny fianakaviany rehetra, nandeha an-tongotra; fa vaditsindrano folo no najanony hiandry trano. 17Nivoaka ny mpanjaka niaraka tamin'ny olona rehetra, nandeha an-tongotra, ary nijanona teo amin'ny trano farany. 18Ny mpanompony rehetra nandeha teny anindrany; ny Keretiana sy ny Feletiana, ary ny Geteana rehetra enin-jato lahy, izay nanaraka azy hatrany Geta, dia nandeha teo alohan'ny mpanjaka.
19Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Etaia, Geteana: Nahoana kosa ity hianao no hiaraka aminay? Miverena hitoetra amin'ny mpanjaka, fa mpivahiny hianao, ary voasesi-tany tsy manam-ponenana. 20Vao omaly no omaly hianao no tonga, ka anio sahady ve dia hoentiko hiara-manjenjena aminay, nefa izaho aza ity tsy mahalala izay tany alehako akory? Koa miverena hianao, ary ento miaraka aminao koa ireo rahalahinao, fa ho aminao anie ny fahasoavana amam-pahamarinan'ny Tompo! 21Dia izao no navalin'i Etaia ny mpanjaka nataony hoe: Velona Iaveh ary velona koa ny mpanjaka tompoko!
Fa na ho aiza na ho aiza ny mpanjaka, na ho faty na ho velona, dia ho ao koa ny mpanomponao. 22Ka hoy Davida tamin'i Etaia: Andeha àry handroso. Dia nandeha Etaia Geteana, sy ny olony rehetra mbamin'ny zaza rehetra niaraka taminy.
23Nitomany nikaikaika avokoa ny tany ama-monina tamin'ny nandalovan'ireo vahoaka rehetra ireo. Nony tafita ny ranon-driaka Sedrona ny mpanjaka, dia nandroso tamin'ny tandrifin'ny làlana mankany an'efitra ny vahoaka. 24Ary indro ny fiaran'Andriamanitra fa napetrak'i Sadaoka, mbamin'ny Levita rehetra nitondra ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra, raha ilay niakatra iny Abiatara, mandra-pahatapitry ny vahoaka rehetra nivoaka avy ao an-tanàna. 25Dia hoy ny mpanjaka tamin'i Sadaoka: Ento miverina ao an-tanàna ihany ny fiaran'Andriamanitra. Raha mahita fitia eo imason'ny Tompo aho dia mbola hoentiny miverina sy hataony mahita ny fiara sy ny fonenany ihany. 26Fa raha hoy kosa izy: Tsy sitrako hianao! dia inty aho, izay heveriny ho mety no aoka hataony ahy. 27Izao koa no nolazain'ny mpanjaka tamin'i Sadaoka mpisorona: Ary hianao, ry mpahita, miverena ao an-tanàna amim-piadanana, miaraka amin'i Akimaasa zanakao sy Jonatasy zanak'i Abiatara, izy roalahy zanakareo miaraka aminareo. 28Jereo, izaho hijanonjanona any amin'ny tany lemaky ny efitra, mandra-pahazoko teny avy aty aminareo mampandre ahy. 29Koa dia nentin'i Sadaoka sy Abiatara niverina tany Jerosalema ny fiaran'Andriamanitra ka nitoetra tao izy.
30Niakatra ny tendrombohitra Oliva Davida, niakatra sy nitomany izy, sady nisaron-doha ary nandeha tsy nikiraro; ny vahoaka rehetra nanaraka azy koa nisaron-doha ary nitomany teny am-piakarana. 31Ary nisy nilaza vaovao tamin'i Davida nanao hoe: Akitofela koa, isan'ny mpiray tetika amin'i Absaloma; ka hoy Davida: Iaveh ô, mangataka aminao aho, ampanjario ho tsinontsinona ny hevitr'i Akitofela. 32Nony tonga tao an-tampony Davida teo amin'izay ivavahan'ny olona amin'Andriamanitra dia inty Kosaia, ilay Arakita, tonga teo anatrehany, ka ny ankanjony rovitra, ny lohany mihosom-bovoka. 33Hoy Davida taminy: Raha mandeha miaraka amiko hianao, tonga enta-mavesatra ho ahy foana. 34Fa raha miverina any an-tanàna kosa hianao ka milaza amin'i Absaloma hoe: Ry mpanjaka ô, te ho mpanomponao aho; mpanompon-drainao aho taloha ka dia ho mpanomponao aho hatramin'izao, amin'izany ho voahodinao hahasoa ahy ny torohevitr'i Akitofela. 35Ho mpiaraka aminao ao koa i Sadaoka sy Abiatara mpisorona, ka hanambaranao izay rehetra ho renao ny amin'ny tranon'ny mpanjaka i Sadaoka sy Abiatara mpisorona. 36Ary ao amin'izy ireo ny zanany roa lahy dia Akimaasa zank'i Sadaoka sy Jonatasy zanak'i Abiatara, ka ireo no hampandrenesanareo ahy izay rehetra ho renareo. 37Dia niverina nankany an-tanàna Kosaia sakaizan'i Davida, ka tamin'izay indrindra no nidiran'i Absaloma tao Jerosalema. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0557 seconds